User တှရေဲ့ Internet Bandwidth ကို ထိနျးသငျ့လား၊ မထိနျးသငျ့ဘူးလား? ~ The ICT.com.mm Blog
User တှရေဲ့ Internet Bandwidth ကို ထိနျးသငျ့လား၊ မထိနျးသငျ့ဘူးလား?
Posted by	 Kyaw San Tun
ဒီတဈ​​​​​​​​​​​​​​ခါပွောမယျ့ အကွောငျးအရာကတော့ တကယျလို့ သငျဟာ Company တဈခုမှာ IT Administrator လုပျမယျဆိုရငျ ကိုယျ့ Company မှာရှိတဲ့ User Computer တှရေဲ့ Internet Bandwidth ကိုထိနျးသငျ့လား၊ ဒါမှမဟုတျ မထိနျးသငျ့ဘူးလား ဆိုတဲ့ အ​​​ ကွောငျးအရာကို တငျပွဆှေးနှေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
User Computer တှရေဲ့ Internet Bandwidth ကိုထိနျးသငျ့တယျ
User Computer တှရေဲ့ Internet Bandwidth ကိုထိနျးသငျ့ပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ User တှကေ အလုပျနဲ့မပကျသတျတဲ့ Video တှေ Download လုပျမယျ၊ Size အရမျးကွီးတဲ့ Software တှကေို Internet Download Manager Software အသုံးပွုပွီး Download လုပျခဲ့မယျဆိုရငျ သငျ့ Company မှာခြိတျဆကျထားတဲ့ Internet ကတျောတျောနှေးသှားပါလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့ Video တှကေို Online ကနတေိုကျရိုကျကွညျ့တာတှေ လုပျခဲ့မယျဆိုရငျ Internet Bandwidth က​​​တျော​​​​တျော​​​​​လေးကိုနှေးသှားပါလိမျ့မယျ။ Internet Bandwidth မြားမြားတပျဆငျထားရငျတော့ ကိစ်စသိပျမရှိပမေယျ့၊ Internet Bandwidth တပျဆငျထားတာလညျး နညျးမယျ၊ အသုံးပွုတဲ့ User တှကေလညျးမြားမယျ၊ Internet Download Manager Software အသုံးပွုပွီး Download လုပျခဲ့မယျဆိုရငျ စဉျးစားသာကွညျ့တော့။ မွနျမာပွညျရဲ့ Internet ကသိတဲ့ အတိုငျးပဲလေ။ ခရုတိုကျသှားလို့ ရအေောကျကကွိုးပွတျရတာနဲ့၊ Exchange ရုံးက Down တာနဲ့၊ Tower တိုငျ​​​ တှကေလိုငျးမမိတာနဲ့၊ SeaGame လုပျလို့ Bandwidth ထပျတိုးလိုကျတာ Internet ကွီးပို​ နှေးသှားရတာနဲ့၊ စုံ​ နေ တာပါပဲ။ ကနြညျးမြိုးစုံနဲ့ကို ကနြတော။ အဲဒါကွောငျ့မို့လို့ User တှရေဲ့ Internet Bandwidth ကိုထိနျးမှအဆငျ​​ပွပေါလိမျ့မယျ။
User Computer တှရေဲ့ Internet Bandwidth ကိုမထိနျးသငျ့ဘူး
နောကျတနညျးပွောရရငျ User Computer ​တှရေဲ့ Internet Bandwidth ကိုမထိနျးသငျ့ဘူးလို့ ယူစမိပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ မွနျမာပွညျရဲ့ Internet ကသိတဲ့အတိုငျးပါပဲ။ ဒီလောကျကနြတောတောငျ Internet Bandwidth ကိုထိနျးမယျဆိုရငျတော့ Google Page တောငျ တကျဖို့တျောတျော စောငျ့ရလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့ Internet Bandwidth ကိုထိနျးလိုကျရငျ အလုပျကိစ်စနဲ့ 10 MB ​လောကျရှိတဲ့ File Size ကွီးကို Email နဲ့ Attach ပို့ပါပွီတဲ့။ တဈရေးပါအိပျလို့ရလောကျတယျ။ Internet Speed ကွောငျ့အလုပျတှပေါထိခိုကျ ရတယျ။ တကယျလို့သာသငျရော Internet Bandwidth ကိုထိနျးခံရပွီး အလုပျကိစ်စ မပွီးစီးရငျဘယျလိုလုပျကွမလဲ။ အဲဒါကွောငျ့မို့လို့ User တှရေဲ့ Internet Bandwidth ကိုမထိနျးမှ အဆငျ​​ပွပေါလိမျ့မယျ။
ကဲ…. ဒီဆှေးနှေးမှုနှဈခုမှာ သငျရော ဘယျလိုထငျပါသလဲ ????
User Computer တှရေဲ့ Internet Bandwidth ကိုထိနျးသငျ့လား၊ ဒါမှမဟုတျ မထိနျးသငျ့ဘူးလားဆိုတဲ့ အကွောငျးကို သငျလညျးဝငျရောကျဆှေးနှေးဖို့ ဖိတျချေါပါတယျ။
About Kyaw San Tun
ကြျောဆနျးထှနျးမှာ Myanmar ICTတှငျ နညျးပညာဆောငျးပါးမြား၊ သုံးသပျခကျြမြားနှငျ့ IT ပစ်စညျးမြား အကွောငျးကို ရေးသား တငျဆကျပေးလကျြ ရှိသညျ။	View all posts by Kyaw San Tun →
Newer Surfly နဲ့ Screen တှကေို Share ကွမယျ
Older Windows 8 မှာ Shut Down ပွုလုပျနညျးမြား
7 thoughts on “User တှရေဲ့ Internet Bandwidth ကို ထိနျးသငျ့လား၊ မထိနျးသငျ့ဘူးလား?”
Bo Htin says:
ဒီ Post ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်..
တကယ်တမ်းပြောရမယ် ဆိုရင် IT Admi ဖက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်
Company တစ်ခု လုံးရဲ့ အင်တာနက် ကောင်းမကောင်း၊ အပေါ်မှာ ပြောသွားသလို အရေးကြီးတဲ့ Mail တစ်ခု ပို့ဖို့ အတွက် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်လို့သူ့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Internet Bandwidth ကို ထိန်းချုပ်ဖို့သင့်ပါတယ် အကုန်လုံး အဆင်ပြေစေနိုင်ဖို့အတွက် Bandwidth ကို ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်
User Level က ဘယ်လောက်ဖြစ်တော့ သုံး Manager Level က ဘယ်လောက်အထိတော့သုံးဆိုပြီးတော့ ကန့်သတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အကုန်လုံးအတွက် အဆင်ပြေစေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီလို Bandwidth ကို မထ်ိန်းချုပ် ထားရင် Download Manager တွေသုံးမယ်၊ Video တွေ Live ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ Connection ကတော့ နှေးနေမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အရေးကြီးတဲ့ Mail တို့ဘာတို့ ကျတော့ ဘယ်လိုမှာ အဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သုံးဖို့ မလိုအပ်တဲ့သူ မသုံးနဲ့တော့ ဆိုရင် User Level တွေက မသုံးရတော့ဘဲ Manager (or) high Level ကလူတွေဘဲ ချက်တင်ထိုင်၊Facebook သုံးနဲ့ သူတို့ဘဲ အဆင်ပြေနေကို User Level တွေက ထိုင်ကြည့်နေရတော့မှာ။ အဲတော့ အကုန်လုံး ညီတူမျှတူ ဖြစ်သွားအောင် User Lever က ဘယ်လောက် ( % ) တော့ သုံး နောက်ကျန် Level တွေက ဘယ်လောက်တော့ ဖြစ်သုံးဆိုရင် အကုန်လုံးလည်း အဆင်ပြေနိုင်မယ်၊ Connection လည်း သူ့ Level အလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ အလုပ်ကိစ္စလည်း အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ပြောချင်တာကို Bandwidth ကို ထိန်းချုပ်ထားတာ ကောင်းပါတယ် ။
ပြီးတော့ အဲလို Bandwidth ကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်မလဲ ဆိုတာကိုလည်း ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးပြီးတော့ တင်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အကုန်လုံး အကျိုးရှိစေမယ်လိုထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကလည်း သိချင်ပါတယ်။
Sai Kyaw Kyaw Htun says:
ရုံးတစ်ရုံးရဲ့လိုအပ်မှု နဲ့ Security ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ISP မှာတော့ မထိန်းသင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ screening တော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်လို ထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာပါ ဆွေးနွေးတင်ပြပေးစေလိုပါတယ်။
Bandwidth ကို ကောင်းကောင်း ထိန်းနိုင်မယ့် Application လေးရှိရင်ပြောပေးပါဦး
Load Balance Router နဲ့ ထိန်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ စက်တစ်လုံးကို bandwidth ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ပေးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတာက TP-Link TL-R470T+ ပါ။ စက်တစ်လုံးချင်းစီကို ထိန်းလို့ရပါတယ်။ တကယ်ထိရောက်ပါတယ်။ Download Manager ကိုလည်း ထိန်းနိုင်သလို Youtube ကိုလည်း ထိန်းလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ – 192.168.1.101 ကို 30 Kbps ဆိုပြီး ပေးလို့ရပါတယ်။ Independent Bandwidth ပါ။ Upload / Download Limit ပေးလို့ရပါတယ်။ Hardware သုံးတာပိုကောင်းပါတယ်။ Software က အဆင်မပြေတာပိုများပါတယ်။